Tsenan’asam-panjakana Covid-19 Mitaky mangarahara ny firaisamonim-pirenena
Andry Ramaroson Tale jeneralin’ny MEH “Misy tsy miray loha ny mpiasan’ny Jirama!”
Maro ny olana ao amin’ny orinasa Jirama, hoy ny tale Jeneralin’ny minisiteran’ny angovo sy akoran’afo (MEH), Andry Ramaroson. Resaka fandrindrana asa na “coordination” angamba no anazavako azy, hoy izy.
Famonoana an’I Danil Radjan Gasy 3 lahy any Tsiafahy, Frantsay 1 arahi-maso
Olona 4 no voasambotra sy niakatra fampanoavana omaly 29 septambra vokatry ny famonoana ilay teratany karana Danil Radjan ny 19 septambra lasa teo teny amin’ny La City Ivandry.
Minisitry ny fitsarana “Tena misy ireo ondry mania ato aminay”
Nitondra ny heviny mahakasika ny fanatsarana ny asam-pitsarana ny minisitry ny fitsarana, Johnny Richard Andriamahefarivo, fa adidin’ny vahoaka ny manampy amin’ny ady amin’ny kolikoly.
Horonantsary mamofady, ompa,… Ny mpandrindra vondrona facebook no manefa
Fanaparitahana sary sy horonantsary mamoafady, fihantsiana adim-poko sy fanompana olona ary fanalam-baraka mpitondra fanjakana , mpanao politika sy ireo olom-pirenena tsotra .
Tontolon` ny fitsarana Hanatsara ny fifandraisana i Madagasikara sy Inde
Nifandinika amin` ny fomba hanatanterana ny fanatsarana ny tontolon` ny fitsarana eto Madagasikara ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana no sady Minisitry ny Fitsarana, Johnny Richard Andriamahefarivo, sy ny masoivoho Indiana miasa sy monina eto amintsika,
Fifaninana hidirana ao amin’ny SEMIPI Mpiadina 70 amin`ny 1307 no horaisina
Omaly alatsinainy 28 septembra no natomboka ny fifaninanana hidirana ao amin'ny sekoly miaramilam-pirenena (SEMIPI) ao Fianarantsoa.
Tsy fitohizan’asam-panjakana Mbola mitarazo ny voka-dratsiny
Toy ireny tsy nahavita na inona na inona avokoa ireo mpitondra teo aloha, hoy ny komity foiben’ny antoko politika MFM, Charles Hilaire Solohery,
Mangataka ny hamoahana ny mangarahara sy ny tamberin’andraikitra momba ny fitantanana ara-bola mikasika ny covid-19 ny Firaisamonim-pirenena. Isan’ny
tsy mbola nahazoana tatitra ny momba ny fahazoana ny tsenan’asam-panjakana. Ny volana jona dia efa nangataka izany tamin’ny CCO ny firaisamonim-pirenena, saingy tsy nisy valiny. Ny lisitr’ireo tsenan’asam-panjakana momba ny fiatrehana, ny vola hoenti-miady na ny “fonds de riposte” no angatahan’izy ireo mangarahara ny fomba nitantanana izany. Ady hevitra hatrany am-piandohana ny momba ny fangaraharana ara-pitantanana ny fanampiana iraisam-pirenena izay efa manodidina ny 600 tapitrisa dolara, ny tetibola miodina ao anatin’ny CCO,… Isan’ireo naneho izay fangatahana fangaraharana izay ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena Rtoa Christine Razanamahasoa ny 03 jolay teo. Nilaza ny Filoham-pirenena ny alahady 12 jolay teo, fa mangarahara ny fitantanana, kanefa toa samihafa ny fomba firesaky ny samy mpitondra, toy ireo fiara tsy mataho-dàlana maro be, izay nandanian-Rtoa Lalatiana Andriatongarivo rora mihitsy fa fiaram-panjakana natao “requisition” sy nampindramin’ny orinasa manana fiara. Ny filoha anefa nilaza fa novidiana. Ahoana ny momba ireo fiara fitondrana marary nampiana ny anaran’ny Filoha tany Toamasina? Ohatrinona ny vola miodina ao anatin’ny CCO sy ny rafitra vaovao vao natsangana?